Su’aal Askari Berbera – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Shanaad Qalinkii Yuusuf Garaad | Haldoor News
Su’aal Askari Berbera – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Shanaad Qalinkii Yuusuf Garaad
Waxaan xusuustaa niman aan is naqaan oo Sucuudiga laga soo tarxiilay oo aan Berbera isku aragnay in maalin ay i geeyeen guriga ay joogeen oo uu lahaa nin sarkaal militeri ah.
Waxaa guriga ka adeegaya wiil aad u yar oo haddiiba uu taban sano gaaray, malahayga, aan laba ama saddex sano ka badani ula jirin. Wuxuu ku hadlayaa af-guriga looga hadlo degaannada koofurka qaarkood siiba aagga Balcad iyo Banaadir.
Laakiin, ayuu yiri, markii aan arkay ninka sidaan u yar waxaan goostay in aanan geyn goob dagaal. Waxaan ku soo daray ciidanka ilaalada ah ee aniga ila shaqeeya, laakiin adeegyada yaryar ayaan u dirsadaa.
Maalin ayaan soo arkay isaga oo wax dhigaya. Aad ayaan ugu bogay garashadiisa, is xilqaankiisa, hagar la’aanta uu casharka u bixinayo iyo waalidnimada iyo baarrinnimada qabku ka maqan yahay ee uu carruurta ula dhaqmayo. Waxaa haddana i tabaatay sida uu keligii u yahay, una yahay agab la’aan. Sida maamule, macallimiin kale iyo shaqaale Iskuul ay kaalintoodu u maqan tahay.
Waxaan ahaa nin dhallinyaro ah oo firfirconi iyo isku kalsoonaan badan ku shaqeeya laakiin aan waayo arag ahayn oo ay dunidu la fudud tahay. Wax kasta waan isku qaadi jiray aniga oo mooda in aan ka lib keeni karo. Buugga Saaxiibbo Kasbo oo an akhrisay tobaneeyo sano ka hor ayaan ku dhaqmaa. In badanna waa ay ii shaqeysay.
Aniga oo weli ku jira xulidda macallimiin Dugsi Sare oo aan Muqdisho iyo Berbera labadaba ka raadinayo ayaa qof howsha dhinac uga jiray uu isaga oo aan i wargelin wuxuu arrinkii hor dhigay mas’uul sare oo Wasaaradda Waxbarashada ah, kaas oo jawaabtiisu ay noqotay “Suurta-gal ma aha”.
Sida uu saaxiibkeey yeelay ma ahayn dariiqii aan is lahaa aad u martid oggolaashada Wasaaradda Waxbarashada. Laakiin mar haddii MAYA la ii soo qaaday, waxaa khasab ah in aan dib u dego, oo aan aqbalo in aan hungoobay.
Markaas uun ayaan billaabay in aan dib isugu noqdo oo aan u qaatay in ay dhici karto in aan faraha kula jiro howlo aanan fahamsaneyn. In ‘waa macquul’ oo keliya aanay ku filleyn in woqooyiga ra’yi laga rogo waxqabad xataa haddii uu yahay mid dadka iyo dalka u dan ah